Soosaarayaasha & Alaab-qeybiyeyaasha Graphite | Shiinaha Graphite ul Factory
Usha kuleylka kuleylka
Waxaa jira in kabadan 20 nooc oo qayb garaaf ah oo kuyaala CZ berrinka kuleylka, kuwaas oo hantidooda maaddooyinka ah iyo farsamooyinka farsamaynta ay saameyn weyn ku leeyihiin tayada hal baaldi. Waxaan u adeegsannaa waxyaabo garaaf ah oo tayo sare leh oo leh awood sare, isticmaalka hoose, qaab dhismeedka wanaagsan, qaabdhismeedka jirka iyo kiimikada oo isku mid ah si loo soo saaro noocyo kala duwan oo kuleyl ah iyo qaybo, sidaa darteed alaabtu waxay leeyihiin tayo sare.
Nadaafad Sare Sawirka Sawirka Sawirka
Sawirka Isostatic Pressing Graphite waa nooc cusub oo walxaha garaafka ah oo la soo saaray 1940-yadii oo leh taxaneyaal sifooyin heer sare ah. Graphite Sawirka Isostatic wuxuu leeyahay iska caabin kuleyl wanaagsan. Gaaska aan firfircooneyn, xoogiisa farsamo wuxuu ku kordhayaa kororka heerkulka, wuxuu gaarayaa qiimaha ugu sarreeya qiyaastii 2500 ℃ .Marka la barbardhigo garaafka caadiga ah, qaabdhismeedka garaafka 'isostatic graphite' ayaa ah mid aad u jilicsan, jilicsan, oo qaabeysan. Qiyaasta kororka kuleylka ee kuleylka waa mid aad u hooseeya, iska caabbinta kuleylka kuleylka waa mid aad u fiican, isotropic-keedana, iska caabinta daxalka kiimikada waa mid xoogan, isla markaa, waxay leedahay kuleyl iyo kuleyl wanaagsan iyo waxqabadka mashiinka.
Spectrum Rod Graphite Saafi ah
Udubka garaafka 'spectral graphite rod' waa inuu ahaadaa mid daahir ah, gaar ahaan falanqaynta tayada ee astaamaha raadraaca, wasakhda aadka u yar ee raadadka lama oggola inay jirto. Guud ahaan marka laga hadlayo, wasakhda ku jirta alaabada garaafka ee loo isticmaalo kormeerka falanqaynta muuqaalka inta badan waxaa ka mid ah Al, B, Ca, Cu, Fe, Mg, Si, Ti, V iwm marka lagu daro, K, Mn, Cr, Ni, iwm. Sidoo kale way jiri karaan . Sababtoo ah hagaajinta iyo adeegsiga cilmi baarista sare ee isdaahirinta iyo tikniyoolajiyadda isdaahirinta ee warshadaha laxiriira, ku dhowaad wax wasakh ah lama ogaan karo hadda, iyo soosaarka warshadaha ee usha garaad sare ee garaaf garaynta falanqaynta muuqaalka.